पिरामिड घोटाला | अर्थतन्त्र वित्त
एनकर्नी आर्कोया | | मा अद्यावधिक गरियो 19/10/2021 21:27 | negocios
पक्कै तपाइँ कहिल्यै को बारे मा सुन्नुभएको छ पिरामिड योजना, समाचार, साथी वा परिवार को माध्यम बाट चाहे। हुनसक्छ तपाइँ यसलाई तपाइँको आफ्नै मासु मा पनि अनुभव गर्नुभएको छ। एक व्यापार परियोजना हो कि तपाइँ धेरै उच्च रिटर्न को वादा गर्नुहुन्छ र त्यो केहि नगरीकन मात्र तपाइँ एक भाग्य प्राप्त गर्नुहुनेछ।
पिरामिड घोटाला दिन को क्रम हो र उनीहरु धेरै मानिसहरु लाई डुबाउन को लागी परिवर्तन हुँदैछन्। वास्तव मा, तिनीहरुको अस्तित्व एक लामो समय पछि जान्छ, तर यो सत्य हो कि यो २० औं र २१ औं शताब्दी मा भएको छ जब उनीहरु धेरै सक्रिय छन्। अब, एक पिरामिड घोटाला के हो? यसमा के विशेषताहरु छन्? त्यहाँ धेरै प्रकार छन्? तिनीहरूलाई कसरी पत्ता लगाउने? यदि तपाइँ सबै कुरा को बारे मा सूचित गर्न चाहानुहुन्छ, जानकारी को लागी एक नजर हामी तपाइँको लागी तयार गरीएको छ।
1 पिरामिड घोटाला के हो?
1.1 पिरामिड घोटाला को विशेषताहरु
2 पिरामिड घोटाला को प्रकार
2.1 पिरामिड खोल्नुहोस्
2.2 पिरामिड बन्द
3 पिरामिड घोटाला कसरी काम गर्दछ
4 कसरी थाहा छ यदि तपाइँ एक पिरामिड घोटाला को सामना गर्दै हुनुहुन्छ
पिरामिड घोटाला के हो?
पिरामिड घोटाला, जसलाई पिरामिड बिक्री को रूप मा पनि जानिन्छ, RAE (रोयल स्पेनिश एकेडेमी) मा कानूनी स्पेनिश को पान-हिस्पैनिक शब्दकोश मा एकत्रित गरीएको छ, र यो भन्छ कि यो सबै हो:
"अनुचित प्रतिस्पर्धा को अधिनियम उपभोक्ताहरु जो एक वितरण प्रणाली मा प्रवेश गर्न को लागी केहि उत्पादनहरु लाई खरीद गर्न को लागी आवश्यक छ, जसमा पारिश्रमिक नयाँ सदस्यहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी विदेशी मुद्रा मा प्राप्त गरीन्छ।"
अन्य शब्दहरुमा, हामी एक को सन्दर्भ गर्दै छौं ब्यापार जसमा यो जनता हो जो यसको हिस्सा हो जसले उनीहरुलाई बढाउनु पर्छ र, बदले मा, नयाँ मान्छे लाई आकर्षित गर्न को लागी कि नयाँहरु लाई पुरानाहरु द्वारा प्राप्त गरीएको लाभहरु को उत्पादन।
एक सामान्य नियम को रूप मा, पिरामिड घोटाला सधैं उत्पादनहरु र / वा सेवाहरु को बिक्री को लागी एक व्यापार को रूप मा छापिएको छ र त्यो बिक्री मुख्य उद्देश्य हो। तर वास्तविकता मा के मामिला यति धेरै छैन कि उनीहरु उत्पादनहरु बेच्छन् तर उनीहरु ब्यापार को लागी मानिसहरुलाई आकर्षित गर्छन् किनकि उनीहरु प्रवेश गर्दा तिर्नु पर्छ। र यो यो हो कि नयाँ पैसा प्रविष्ट गर्ने पैसा संग, यो पुरानाहरुलाई तिर्ने कुरा संग छ, यसैले, यदि त्यहाँ नयाँ "कामदार" को प्रवेश छैन, प्रणाली पीडित छ।
सुरुमा प्रणाली काम गर्दछ, किनकि थोरै मानिसहरु आउँछन् र चूंकि त्यहाँ पुराना मानिसहरु भन्दा धेरै नयाँ मानिसहरु छन्, लाभ धेरै धेरै छन्। जे होस्, यो बढ्छ, यो राम्रो लाभ प्राप्त गर्न को लागी अधिक गाह्रो छ। त्यो हो यदि हामी यो ध्यानमा राख्दैनौं कि, जब यो नयाँ मानिसहरु को लागी प्रवेश गर्न को लागी गाह्रो छ, फाइदाहरु बिन्दुमा पर्छन् कि निर्देश बनी रहेको पैसा संग गायब हुन सक्छ र कहिल्यै चार्ज छैन।
पिरामिड घोटाला को विशेषताहरु
तपाईंलाई ध्यान राख्नु पर्छ कि संसारका केहि देशहरुमा पिरामिड योजना अवैध छ, जबकि अरु मा यो निषेधित छैन, तर यो एक 'alegal' स्थिति को रूप मा कानूनी छ। यही कारण हो कि तपाइँ धेरै सावधान रहनु पर्छ किनकि तपाइँ उनीहरु संग धेरै हराउन सक्नुहुन्छ।
सामान्य मा, पिरामिड घोटाला को विशेषताहरु हुन्:
यो सहभागीहरु जो ग्राहकहरु को लागी हेर्छन् र उनीहरु पनि सहभागी बन्छन्।
यदि बजार संतृप्त हुन्छ, पछिल्लो प्रवेश गर्न को लागी कुनै मुनाफा छैन। निस्सन्देह, त्यहाँ सधैं मानिसहरु हुनेछन् जो उनीहरुले प्रतिज्ञा गरे अनुसार शुल्क लिनेछन्, किनकि उनीहरुलाई छवि दिनु पर्छ कि उनीहरु साँच्चै पैसा कमाउँछन्।
रिटर्न उनीहरु लाई प्रस्ताव सधैं धेरै उच्च छन् र उनीहरु तपाइँ आश्वासन दिनुहुन्छ कि तपाइँ उनीहरुलाई पाउनुहुनेछ। तर तिनीहरू साँच्चै ग्यारेन्टी हुन सक्दैनन्।
उनीहरु उत्पादनहरु मा एक प्रतिशत प्रदान गर्दछ कि प्रणाली मा प्रवेश लाई प्रोत्साहित गर्न को लागी बेचिन्छ। त्यो हो, बेचेको प्रत्येक उत्पादन को लागी, तपाइँ लाभ बाट x पैसा प्राप्त गर्नुहुन्छ। र एकै समयमा यो अरु को लागी सामेल हुन को लागी "चारा" हो।
पिरामिड घोटाला को प्रकार
एक पिरामिड घोटाला दुई फरक तरिका मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ: यदि यो खुला छ वा यदि यो बन्द छ। उनीहरुलाई के फरक पार्छ? यसलाई नजिकबाट हेरौं।
ती हुन् जसमा सहभागीहरुलाई थाहा छ कसरी संरचना र यो कसरी काम गर्दछ। त्यो हो, उनीहरुलाई थाहा छ कि उनीहरु एक पिरामिड घोटाला मा छन् तर उनीहरु यसमा भाग लिन्छन्।
एक कानूनी स्तर मा, यो एक धोखाधडी र एक वैधता को बीच मा हुनेछ, यद्यपि यो आन्तरिक रूपमा जानिन्छ, प्रायः तपाइँसँग सबै जानकारी छैन, विशेष गरी यस व्यवसाय संग सम्बन्धित को परिणाम को बारे मा।
धेरै पटक पिरामिड को यी प्रकार बहुस्तरीय बिक्री व्यवसाय संग भ्रमित छन्।
यस अवस्थामा त्यहाँ एक व्यक्ति, वा व्यक्तिहरु, जो छन् पिरामिड को "मालिकहरु" र जो प्रवेश र को छोड्ने निर्णय, जसले लगानी प्राप्त गर्दछ, जसले लाभ प्राप्त गर्दछ, आदि।
वास्तविकता मा, उसले प्राप्त गरेको पैसा उसको आफ्नै फाइदा को लागी प्रयोग गरीएको छैन, तर यसको साथ उसले सबैभन्दा पुराना सहभागीहरुलाई लाभ तिर्दछ, र बाँकी पैसा नयाँ सदस्यहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
पिरामिड घोटाला कसरी काम गर्दछ
एक पिरामिड घोटाला प्रक्रिया बुझ्न को लागी एक धेरै सजिलो मा बस्छ। व्यापार सहभागीहरु को एक श्रृंखला बाट बनेको छ, र यदि तपाइँ प्रवेश गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ एक टिकट तिर्नुपर्छ (यद्यपि कहिलेकाहिँ तपाइँ केहि तिर्नु पर्दैन, यो मात्र भित्रको तथ्य हो)। त्यो पैसा जुन प्राप्त गर्न सकिन्छ (जुन प्रवेश को लागी वा उत्पादनहरु को खरीद को लागी र त्यसपछि उनीहरुलाई बेच्न सक्छ) अन्य ब्यक्तिहरु को लागी लाभ र चासो तिर्न को लागी काम गर्दछ र तपाइँ आफैंलाई "बल" उत्पादनहरु लाई सिफारिश गर्न को लागी तपाइँ बेच्नुहुन्छ तर साथै व्यापार मा सामेल हुन को लागी अधिक मान्छे लाई आकर्षित गर्न को लागी।
वास्तवमा, प्रत्येक व्यक्ति जो सामेल हुन्छन् को लागी, तपाइँ उत्पादनहरु बेच्नु भन्दा धेरै कमाउनुहुनेछ, तेसैले यो अधिक लाभदायक छ "मन" नयाँ मानिसहरु लाई सजीलो पैसा प्राप्त गर्न को लागी।
कसरी थाहा छ यदि तपाइँ एक पिरामिड घोटाला को सामना गर्दै हुनुहुन्छ
के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ एक व्यापार मा हुनुहुन्छ कि एक प्रच्छन्न पिरामिड घोटाला हो? संकेत हो कि तपाइँ चेतावनी दिन सक्नुहुन्छ कि यो मामला हो निम्नानुसार छन्:
भर्ती गर्न 'आवश्यकता'। यदि कुनै पनी समय मा उनीहरु तपाइँलाई नयाँ व्यक्तिहरु लाई समावेश गर्न को लागी सोध्छन्, यो राम्रो हुनेछ यदि तपाइँका परिचितहरु मध्ये कुनै पनि भाग लिन को लागी प्रोत्साहित गरियो, तपाइँ कम्पनी र उनीहरु को बीच एक लिंक बन्नुभयो, भाग्नुहोस्। त्यो मात्र तपाइँलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाइँ एक पिरामिड घोटाला को सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
कामको लागि भुक्तानी। उनीहरु पहिले नै यो परिवर्तन गरीरहेछन्, तर धेरै अझै पनी यो विचार संग जारी छ कि, ब्यापार मा प्रवेश गर्न को लागी, तपाइँ एक टिकट तिर्न पर्छ, वा ब्यापार कि तपाइँ बेच्न जाँदै हुनुहुन्छ। यदि उनीहरु गर्छन, यो एक नराम्रो सम्झौता हो किनकि के हुन्छ यदि तपाइँ यसलाई बेच्नुहुन्न? खैर, तपाइँ तपाइँको पैसा गुमाउनुहुन्छ।
नाफा को 'ग्यारेन्टी'। यो ठूलो समस्या को अर्को हो। र यो हो कि पक्कै पनी उनीहरु तपाइँलाई तिर्न जाँदैछन्। उनीहरु के चाहन्छन् तपाइँ खुसी हुन को लागी हो र यस को लागी उनीहरु तपाइँको पहिलो भुक्तानी गर्न को लागी पैसा बचाउँछन्। समस्या यो हो कि जब त्यो संख्या ठूलो चीजहरु बदल्न सक्छ र अन्त मा, तपाइँ केहि संग छोडिएको छ।
के तपाइँ पिरामिड घोटाला को उदाहरण थाहा छ कि तपाइँ हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ? हामी सबै कान र आँखा हौं!
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » पिरामिड घोटाला
अक्टोबर5मा लगानी गर्न को लागी 2021 अवमूल्यन कम्पनीहरु